7 Bachelor-ka Ugu Fiican Iyo Safarada Bachelorette Ee Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 7 Bachelor-ka Ugu Fiican Iyo Safarada Bachelorette Ee Yurub
Qorshaynta xaflada bachelorette ama bachelor waa runtii qaybta ugu fiican ee noqoshada ninka ugu wanaagsan ama gabadha sharafta leh. Muxuu noqon karaa mid ka sii xiiso badan marka laga soo wada urursado baandooyinka oo dhan si loogu helo nolol xun oo Yurub dhexdeeda ah? Gaar ahaan ka hor inta aysan kuwa nasiibka leh ee kooxda ku deg degin.
Yurub waa meel wanaagsan oo loogu talo galay helitaanka xafladaha. Waxaan gacanta ku qabanay 7 ee safarada ugu fiican ee bachelor iyo bachelorette ee Yurub. Laga soo bilaabo safarada raaxada leh ee raaxada leh ee loo socdo xafladda habeenka oo dhan iyo baashaalista. Sidaas, waxaa waajib kugu ah inaad abuurto safarka ugu maskaxda badan ee aroosadda iyo aroosadda-si la noqdo.
1. Miisaaniyadda Hedonistic Budle-Friendly / Bachelorette ee Berlin
Iyada oo leh bar baari weyn, Berlin waa meel aad ufiican oo loogu talo galay safarka xiisaha leh ee xiisaha leh iyo bachelorette ee Yurub.
Berlin waxaa lagu yaqaanaa xisbiyadeeda waalan iyo Oktoberfest waana ku habboon yihiin a sabtida iyo axada. Waad ku bilaabi kartaa xaflada adoo ku helaya sawirada raaxada ee baandada goobta caanka ah ee Bari Side Gallery. Markaasuu, ku sii wad socdaalka baararka shaqsiyadeed ama aad u hesho dhiirrigelin iyo go bar baro. Intaas waxaa sii dheer, Berlin waa hoyga qaar baaxad weyn, halkaas oo aad ka dhidbi karto dhammaan wixii ka soo baxa ka dib markii habeenkii naasaha la nuugo.
2. Safarka Bachelorette / Bachelor To Amsterdam
Caqli iyo xamaasad, Amsterdam waa magaalada dembiyada Yurub iyo jannada yar. Haddii aad qorsheynaysid safarka gu'ga bachelorette ee Yurub, ka dibna Amsterdam waa kan ugu jacaylka badan. Kanaalka ubaxa, guryaha midabka leh iyo kafateeriyada cute, wadooyinka baaskiilka, iyo dabcan xaflad ubax ah bisha Maajo. Dhamaan mucjisooyinkaas oo dhan waxay ka dhigi doonaan aroosadda-raaxeysashada jannada toddobaad.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad xiisaynayso usbuuc waali ah oo aad u dabaaldegto daqiiqadihii ugu dambeeyay ee xorriyadda, markaa Amsterdam waa kufiican tahay xafladda bachelor duurjoogta ah. Ka bilow Muse Du Sexe ilaa degmada nalalka casaanka, oo ku dhammee cabitaan iyo casho cabitaan. Sayidka, safarka bachelor ee Amsterdam wuxuu shaki la'aan noqon doonaa safar aan la ilaawi karin.
3. Safarka Bachelorette / Bachelor To Prague
Mudanayaashu runtii way ku qancin doonaan aragtida magaalada quruxda badan ee Prague, naqshadaha, iyo fanka. Intaa waxaa dheer, Prague ayaa caan ku ah jardiinooyinkeeda sare ee biirka iyo meelaha lagu ciyaaro ee is biirsaday. Taas macnaheedu waa in baararka Prague ay ku yaalliin meelaha ugu wanaagsan uguna adeegaan cabitaannada ugu macaan iyo xeelad leh ee Yurub, tusaale ahaan, Baarka is biirsaday ee Hemingway. Cabitaano yar kadib haddii aad rabto habeen runti duurjoog ah, madaxa si aad u ogaato Prague-caanka adduunka muuqaal nololeed habeenkii. Si loo daaweeyo subaxaas subaxnimo, iska hubi meesha ugufiican ee qaxwada Prague, Mug Cafe. Waxay qaaska ah waa cabitaanka kafeega hodan iyo cuntada delicious.
Si kastaba ha ahaatee, hadaadan rabin inaad maskaxdaada ku weydo habeen qoob ka ciyaar ah, ka dib madaxa banaanka bartamaha magaalada. Prague waxay hoy u leedahay heerkul badan iyo dabayl halkaas oo aad ka heli karto xaashiyaha lafta ah ka dib booqashada qalcaddii enchanted. Tani dhab ahaantii waxay ka dhigi doontaa aroosadda-in-ay dareento sidii boqorad gudaha ah sheeko cirfiid. Wax kale oo weyn oo raggu gabi ahaanba jeclaan doonaan waa wabiga oo socda.
4. Safarka Ku Socda Budapest
Farshaxanka cajiibka ah iyo wabiga Danube oo socda, Ka dhig Budapest meel cajiib ah oo loogu talagalay bachelorette iyo safarka bachelor.
Cabitaannada iyo xafladaha ayaa ku qulqulaya webiga Danube, ka gudubka magaalada iyadoo la adeegsanayo aragtiyo qurux badan, waxay ku habboon tahay bachelorette iyo bachelor party. Fursadda kale ee weyn waa usbuuc fasaxa nasashada ee gabdhaha oo raaxo leh. Budapest waa magaalo weyn oo loogu talagalay booqashooyinka cuntada, halkaas oo aad iskudaybi karto khamri qaran oo ka socda Eger iyo Somlo oo dhadhamin suxuunta dhaqanka ee Hungarianka iidoor si loogu dabaaldego nolosha ugu dambeysa.
Qolka Wanaagsan ee Faust Wine waa mid ka mid ah meelihii ugu da'da weynaa Yurub iyo halkaad ka heli karto ku raaxayso kudarta ugu wanaagsan oo dhadhamiya hilibka lo'da ka adeegta iyo waxyaabaha kale ee macaan.
Vienna ilaa Budapest oo ay Tareen Tareenku leeyihiin
Prague si Budapest by Tareenka
Munich ilaa Budapest waxaa qoray Tareenka
Graz ilaa Budapest tareenka
5. Safarka Bachelor / Bachelorette To Tirol
Loogu talagalay adventurous iyo adrenaline-kobcinta safarka bachelor ee Yurub, gobolka Tirol ee Awstaraaliya ayaa ah meesha ugu wanaagsan. Waxaad dareemi doontaa inaad dib ugu laabaneyso asalkii. Fadhiiso agagaarka dabka shidan, bannaanka gurigaaga alwaax ah oo loogu talo galay hibo dubay ama cabitaan. Haddii baandada ay u taagan tahay a ugaarsiga fuulitaanka dhagaxa, aqado, iyo hawlo badan oo bannaanka ka socda, ka dibna Aagga 47, waa doqon nacasnimo u ah isbuucaan-dhamaan-ragga iyo xafladda weyn.
Tirol sidoo kale waa kufiican tahay safarka bachelorette, gaar ahaan haddii aad tahay qof isboorti oo aad rabto inaad khibrad dabiici ah la kulanto mid ka mid ah kuwa ugu badan meelo qurux badan in Europe. Muuqaallada waaweyn iyo hawada cusub waxay ku habboon yihiin isku-xidhka iyo abuuritaanka daqiiqado xusuus mudan oo ku yaal kaymaha iyo biyo-biyoodka Tirol.
Munich ilaa Innsbruck by Tareenka
Salzburg ilaa Innsbruck by Tareenka
Oberstdorf ilaa Innsbruck by Train
Graz ilaa Innsbruck by Tareenka
6. Swiss Alps The
Aragtiyaha xiisaha leh, buuraha, dooxooyinka, iyo biyo-dhacyo buuraha Switzerland waa goob kufiican safarka riyooyinka dhabta ah ee Yurub. Alps-ka Swiss waa janno iyo Disneyland oo loogu talagalay baandada. Tusaale ahaan, haddii kooxdaadu ay jecel yihiin nashaadaadyada bannaanka, ka dib waad iska tegi kartaa barafka haddii qabowga yahay. Or, dhanka kale, haddii ay tahay guga ama safarka xagaaga, ka dibna, socod, ama ku qaboojinta tuulada qurxoon ayaa ah kaliya wax yaabaha lagu sameeyo meeshan la yaabka leh.
Intii safarka jaamacadda ama safarka koowaad ee 'Alps Switzerland' laga yaabo inuu noqdo mid qaali ah marka loo eego safarka sabtida ee loo aado magaalada Berlin ama Prague, Waxay kaloo noqon kartaa halkaad ka abuuri karto xusuus-hayn cimri dheeri ku jirtay taasina waa qiimo la’aan.
Basel in ay Tareennada Tareenka
Geneva ilaa Zermatt by Tareenka
Bern ilaa Zermatt by Tareenka
Lucerne ilaa Zermatt by Tareenka
7. Safarka Bachelor / Bachelorette To Aquitaine, France
Bachelorette iyo safarka bachelor waa fursad fiican oo lagu aadayo hal abuur, isku day wax cusub oo jebinta howlaha joogtada ah. Waa maxay sababta aad ugu sameyn weydo qaab ahaan oo aad jidka u marayso oo aad ugu shubto sunta? Glamping waa ikhtiyaar la yaab leh oo loogu talagalay bachelor-maskax-dhiska maskaxda iyo safarka bachelorette. Baadiyaha Faransiiska waa wax laga naxo goobta xero oo ku taal raaxo qaali ah oo reer Mongolian ah oo ku taal dhul beereed Faransiis oo qurux badan leh asxaabtaada ugu fiican.
Meesha dibedda lagu aaso, miro, quraac sariirta, xabbad xero, iyo baaskiil wadista buuraha qurxoon waa waxwalba oo ku saabsan dib-u-abuur-dabiici la’aan ah safar safar bachelorette oo qof walbaa xusi doono. Safarada Bachelorette iyo bachelor waa qaar ka mid ah waqtiyada ugu quruxda badan nolosha qof walba. Sayidka, waa in lagu xusaa meelaha ugu quruxda badan aduunka oo Yurubna ay kufiican tahay riyo ama bachelo duurjoog ah.
Nantes ilaa Bordeaux ee Train
Paris ilaa Bordeaux waxaa qoray Train
Lyon oo u socota Bordeaux by Tareenka
Marseilles ilaa Bordeaux by Tareenka
Aad bay u fududahay in la tababaro safarka Yurub oo lagu safro Save A tareenka Meel kasta oo aad tagtid iyo magaalo kasta oo annaga ku taal 7 meelaha ugu wanaagsan ee loogu safro safarada bachelor.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada internetka "7 Bachelor iyo Safarada Bachelorette ee Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-bachelor-bachelorette-trips-europe%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት– (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa jidadkeena tareenka ugu caansan - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / de si / fr ama / es iyo luuqado badan.
bachelor bachelorandbachelorette bachelorette BachelorettetripEurope BachelortripEurope SafarkaAlps SafarkaPrague travelswitzerland TravelTirol
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka ee Britain, Tareen safarka Shiinaha, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareen Safar Talyaani